Abantu vs iiChatbots: Ngubani oza kuKhathalela abaThengi? | Martech Zone
NgoMgqibelo, uJanuwari 12, 2019 NgoMgqibelo, uJanuwari 12, 2019 UJános Szabó
Emuva ngo-2016 xa iincoko zaduma wonke umntu wathi bazakuthatha indawo yabantu abasebenza kumasebe okhathalelo lwabathengi. Emva kokuqokelela iminyaka engama-2.5 yamava malunga ne-Messenger chatbots inyani ijongeka yahlukile namhlanje.
Umbuzo awukho ngeengxoxo ezithatha indawo yabantu, kodwa kunokuba zisebenza njani kunye neengxoxo kunye nabantu ngesandla.
I-Chatbot tech yayisithembiso esikhulu ekuqaleni. Ukufaka ibango lokuphendula umbuzo wabathengi ngendlela yokuncokola, kunye nokubonelela ngoncedo lomntu kumatyala okusetyenziswa aphindaphindwayo. Kwavela ukuba itekhnoloji kwimeko yayo yangoku ayinakho ukufikelela kwesi sithembiso. Iingxoxo zisebenze nge-70% yereyithi yokusilela,eshiye imibuzo yabathengi ingaphendulwa kwaye yadala amava abathengi ababi.
I-Facebook iphendule ngokukhawuleza kwaye yalungisa izinto ezilindelweyo malunga neencoko. Endaweni yokusebenzisa iincoko ezivulekileyo zencoko ababhekisi phambili be-chatbot bakhuthazwe ukuba bakhe intsebenziswano esekwe kumgaqo. I-UX yenziwe lula ukulungiselela abathengi ngokuthepha kumaqhosha ahlukeneyo kwi-UI ye-Messenger. I-Facebook iyekile ukusebenzisa igama ingxoxo kwaye ngoku ibiza ezi zinto zisebenzisanayo amava omthunywa. Ngale ntshukumo, indima yeencoko zatshintshile ukusuka kulawulo lwencoko ukuya ekwenziweni kweenkonzo zokuzenzela (ii-IVR ezifana) namajelo emibuzo yabathengi abakuTier 1.
Owona msebenzi uphambili weengxoxo osuswe kwinkathalelo yabathengi waya kwimisebenzi enxulumene nentengiso. Iincoko zisebenza namhlanje njengendawo yokuqala yokunxibelelana nabathengi kwaye zixhomekeke ekungeneleleni kwabantu xa umthengi efuna ukuba nzima ngakumbi.
Kwaye ndicinga ukuba kulungile ngoluhlobo!
Ixesha elizayo loKhathalelo loMthengi olusekwe kwiNgxoxo
Ikamva lenkathalelo esekwe kunonophelo lwabathengi iya kuba sisisombululo se-hybrid apho i-bots zikumgca wangaphambili kwaye abantu (bahlala besetyenziswa) ukubuyela umva.
Iibhotshi ziya kufikelela ngokuthe ngqo kwinani elikhulu labathengi, kwaye abantu baya kujongana nezikhokelo ezifanelekileyo.
Iibhotshi ziya kunceda abathengi ukuba bahambe kwi-FAQ njengamaxwebhu, kwaye abantu baya kungenelela xa umbuzo womthengi unzima kakhulu.
Iibhothi ziya kuhambisa iindlela ezinkulu zokufumanisa imveliso, ukuxhasa ukuthengisa ngendlela enokwenzakala kwaye abantu baya kujongana neencoko zokhathalelo lwabathengi.
Kuyindalo ukuba iinkampani ziziva zilingwa ukuba zingafuni ukuxoxa ngencoko xa kuthelekiswa neendleko kwaye zihlala ziguquka kubasebenzi. Kwaye kulungile ukwenza i-automate imisebenzi kunye neencoko ezingafunekiyo uvelwano lomntu. Kodwa uvelwano lomntu alunakuzenzekelayo. Amathuba aphambili ekukhuleni kwegama ekuphumleni ekwakheni unxibelelwano lweemvakalelo nabathengi ngamava abo. Ukuba umthengi uziva ukhathalelo lomntu uya kuthi aphinde athenge kwakhona. Ngokunyuka kweendleko zokufumana abathengi, kufuneka uqiniseke ukuba abathengi obafumanayo babuya amaxesha ngamaxesha.
"… Ngcono" ingaphezulu "kokukhawuleza."
Ngelixa abathengi abavakalelwa kukuba uphawu lubonelela ngenkonzo ekhawulezileyo, bekunamathuba amathandathu okuba bazibandakanye kakhulu. Abathengi abanike uphawu oluhle lophawu kwizinto "zabantu" (njengentlonipho yomenzeli wokhathalelo lwabathengi kunye nokuzimisela ukunceda) banamathuba alithoba okuba bazibandakanye ngokupheleleyo.
Umceli mngeni kukuba fumana ibhalansi phakathi kokuyila kunye nokufaneleka. Isitshixo sokubeka uncumo kubathengi bakho malunga nokufumana ibhalansi elungileyo phakathi kwemisebenzi ezenzekelayo kunye nokhathalelo lomntu.
Ngethamsanqa, iincoko aziyiyo kuphela kwendlela itekhnoloji enokunceda ngayo abantu. Kukho iindlela ezilula zokwandisa imveliso yeearhente zabantu oko kunyusa inani lilonke lokhathalelo lobuqu iarhente yencoko inokunika abathengi.
Impembelelo yokusebenzisa i-AI kwinkonzo yabathengi ekuhlaleni ayinakho ukukhokelela kunciphiso kwimisebenzi yonke yabathengi. Endaweni yoko, iimveliso zinokusebenzisa imveliso eyandisiweyo ukubonelela ngenqanaba eliphezulu lenkonzo ngobukhulu beqela elifanayo. I-AI inceda iarhente yokuncokola ngalo lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze uphendule imibuzo yomthengi ephucukileyo.
"I-AI iya kuba yitekhnoloji yetafile, ebaluleke kuyo nayiphi na inkampani efuna ukuhlala ikhuphisana kwindawo yokusebenzela abathengi."
Ukufunda ngomatshini kunokwandisa amandla earhente yencoko ngendlela ebavumela ukuba bagcine umda wabo. Injongo yethu kuChatler.ai kukugcina ixesha leearhente zencoko, ngokwenza ukuba ulwazi lwengxoxo lufikeleleke ngakumbi, kunye nokucebisa iimpendulo ezifanelekileyo kubathunywa bengxoxo kwimibuzo yabathengi engenayo. I-Chatler.ai ithathe indawo yomsebenzi ongenamveliso nophindaphindayo "wokufumana ikopi-uncamathisele" iiarhente zencoko ngokwenza umsebenzi onzima wokuphakamisa endaweni yabantu. I-algorithms ehlakaniphileyo inokuhlalutya iimbali zencoko kwaye icebise iimpendulo kwimibuzo ebuzwa rhoqo. Abantu bathatha isigqibo sokugqibela kwaye bongeze ubuchukumiso bomntu ngamnye kumyalezo ngamnye ukuqinisekisa ukuba umthengi uziva exatyisiwe. I-teknoloji yokufunda yeChatler.ai inceda ii-brand ukuba zikhuphe iimpendulo zokhathalelo lwabathengi ezikhawulezayo, ezichanekileyo, kunye nokuhambelana.
kunye Ingxoxo.ai ungalawula inani elonyukayo leencoko zokhathalelo lwabathengi kunye neqela elinye. Vumela abantu baphathe iincoko ezibalulekileyo. Vumela i-AI ikuncede nokuba izingxoxo zeencoko zibanjiwe.
Fumana ngakumbi malunga nokuba ungakwenza njani oko Ncokola inokukunceda namhlanje ukuhambisa amava abathengi kunye nokwandisa ukunyaniseka kwabathengi kunye nokuthenga kwakhona.
Bhalisela iAkhawunti yokuNxibelelana Simahla
UJános Szabó yingcali yeqhinga ledijithali kunye nengcali kwezonxibelelwano. Emva kweminyaka engaphezulu kwe-10 yamava earhente yentengiso, wenza iapps yonxibelelwano ebonakalayo kunye nokukhutshelwa okungaphezulu kwezigidi ezi-2. Namhlanje, uJános ukhokela iqela likaChatler, ukugqunywa kwe-AI kukhathalelo lwabathengi.